फिन्ल्यान्डमा दिक्षित नेपाली विद्यार्थीहरुसँग महानायक राजेश हमालले यसरी रमाईलो गरे (भिडियो) – Gulmiews
फिन्ल्यान्डमा दिक्षित नेपाली विद्यार्थीहरुसँग महानायक राजेश हमालले यसरी रमाईलो गरे (भिडियो)
यो पनि हेरौँ: फिन्ल्यान्ड पुगेर राजेश हमालले यसरी आफ्नै बारेमा जोकहरु सुनाए (भिडियो)
कार्यक्रममा बिशेषगरी महानायक हमालले आँफैलाई बिषय बस्तु बनाएर दर्शक हँसाएका थिए । हमालले कार्यक्रममा नाच प्रस्तुत गर्नुका अलावा ननस्टप राजेश हमाल जोक्स प्रस्तुत गरेर दर्शकहरुलाई मनोरन्जन दिएका थिए । हमालले जोक तथा नाच प्रस्तुत गरेपछी फिन्ल्यान्डका बिभिन्न शिक्षण सँस्थाहरुबाट पढाई सकेर एनआरएनको यस् कार्यक्रममा सम्मान थापेका विद्यार्थीहरुसँग पनि रमाईलो गरेका थिए । हेरौँ रमाईलो भिडियोको केही अंश:
भिडियो: सन्तोष राजभण्डारी
Related Posts	चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो र...	October 13, 2016	करिब ६०० ले चन्द्र भण्डारीको टिका ग्रहण गरे (भिडिओ समाचार)...	October 12, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	महेश बस्नेत गुल्मी आउँदै